427s 7 Waxyaabaha ay tahay in laga ogaado Xarunta Tokyo | japan-guide.com images and subtitles
Adoo u adeegaya in kabadan nus milyan rakaab ah maalin walba, Tokyo Station waa mid kamid ah saldhigyada ugu mashquulka badan Japan. Idaacadda ayaa markii ugu horreysay loo furay dadweynaha wax ka badan 100 sano ka hor si dhakhso ahna waxay noqotay transit-ka xarun isku xirta Tokyo iyo dalka intiisa kale ee Japan. Saldhigga Tokyo wuxuu sidoo kale calaamad u yahay eber mayl badan oo tareeno badan. Maanta, Saldhigga Tokyo ee aan ognahay oo aan jecelnahay waa natiijada sanadaha soo celinta iyo dhismaha. Kooxda Marunouchi ayaa dhowaan loo soo celiyay sharaftiisi hore, taariikhiyan, halka kuwa Yaesu dhinac waxay bixisaa muuqaal casri ah oo casri ah. Iyada oo leh heerarkeeda kala duwan iyo dhul ballaaran oo dhulka hoostiisa ku yaal oo bixiya adeegyo kala duwan oo ballaaran, cunto cunid iyo adeegyo, way fududahay in maalin dhan la laalaado lagana helo Tokyo Station iyo agagaarkeeda. Si aan arrimaha kuu fududayno, waxaan soo uruurinnay liis ka kooban 7 waxyaabood oo ay tahay in laga ogaado Xarunta Tokyo. JAPAN RAIL CAFE JAPAN RAIL CAFE wuxuu ahaa kii ugu horreeyay noociisa in laga furo Japan. Waxay ku taalaa meel ka durugsan Saldhigga Dhexe ee Yaesu ee Saldhigga Tokyo, waxay ka kooban tahay safar counter iyo makhaayad siisa socotada macluumaadka socdaalka ee ugu dambeeyay iyo Jabaan suxuunta. Qurxinta gudaha iyo xusuusta ee JAPAN RAIL CAFE sanad kasta way isbadalaan oo diirada la saaraa Gobol ka duwan oo Japan ah wakhti kasta. Shaqaalaha miiska safarka waxay bixiyaan talo aragitaan iyo macluumaad iyo waliba howsha tareenka iyo iibsashada tigidhada. Adeegyadan ayaa bixiya qaab socod safar oo siman oo aan xanuun lahayn, oo aan qiimo lahayn markaad booqanayso meel cusub. Shaashad balaaran oo is dhexgalin leh ayaa soo bandhigeysa fiidiyowyo safarka ah iyo waliba howlo badan. Kafateeriyadu waa goob raaxo leh oo caadi ah, taas oo u fiican la kulanka asxaabta ama waqti dhaafka ka hor ama ka dib tareenka la raaco. Cunto-bixiyeyaashu waxay sugi karaan saxamada Japan, waxayna ku lamaan karaan khamri badan oo kaladuwan iyo cabbitaannada aan khamriga ahayn. Sanduuqyada qaadashada bento qaadane sidoo kale waa la iibsan karaa, kuwa waqtiga gaagaaban. Ugu dambeyntiina, makhaayad sida caadiga u qurxan oo ku taal qeybta maqaayada ayaa soo booqdayaasha goob sawir qaadis ah oo lagu qaado sawirada xuska. Adeegga cambaarada 'ecbo cloak' Helitaanka qashin qafis qolka banaan ee Tokyo Station waxay noqon kartaa baadi goob aan macquul ahayn gaar ahaan xilliyada ugu sarreysa. Adeegsiga adeegga cambaareynta cirku waxay u oggolaaneysaa mid inuu ka boodo dhammaan dhibaatooyinkaas isla markaana toos u a maalin boorso-la'aan. Howlaha haynta maalmeed badan waxaa sidoo kale lagu bixiyaa xirmooyin cambaare ah, taas oo ah ikhtiyaar fiican loogu talagalay kuwa raba inay ku safraan iftiinka safarada habeenkii. Waxa jira tiriyayaal badan oo cambaareyn ah oo cambaareynta ah oo ku yaal Saldhigga Tokyo. Si aad u isticmaasho adeeggan, si fudud uga dhig booskaaga booskaaga iyo lacag bixinta ecbo-ga iskuxiro websaydhka iyo madaxa dukaanka maalinta si aad u dajiso boorsadaada. Dhismaha Saldhigga Tokyo ee Marunouchi Dhismihii Saldhigga Tokyo ee asalka ahaa ayaa la qaabeeyey Waxaa qoray Tatsuno Kingo, oo ahaa naqshadeeye reer Japan ah oo karti badan qarnigii 20aad, iyo dhammaystiray 1914. Si kastaba ha noqotee, dhismaha saldhiga ayaa si weyn loo dhaawacay inta lagu jiray WW2 oo kaliya nooc fudud dhismaha dib ayaa loo dhisay dagaalkii kadib. Laga soo bilaabo 2007 illaa 2012, dhismaha saldhigga ayaa dib loogu soo celiyay sharaftiisii ​​dagaalka kahor. Waxay qaadatay shan sano oo kale in Plaza hore ee saldhiga lagu qurxiyo. Maanta, booqdayaashu way arki karaan sida Tokyo Station ay u ekaan jirtay markii la aasaasay Sannadkii 1914kii, oo lagu dhammaystiro guryaha woqooyiga iyo koonfurta siday u kala horreeyaan. Muuqaalka Saldhigga Tokyo Hoyga Tokyo Station waa matxaf farshaxan oo ku yaal gudaha Dhismaha Saldhigga Tokyo Marunouchi. Marka lagu daro bandhigyada ku meel gaarka ah, maktabaddu waa meel fiican oo lagu arko qaar ka mid ah naqshadaha asliga ah iyo qaab dhismeedka gudaha ee Tokyo Station, oo bixiya wax gaar ah isku dhafka fanka iyo hiddaha dhaqanka. Goobaha Cuntada iyo Dukaameysiga ee maraya Saldhigga Tokyo weligood ma noqon doonaan waa inaad ka walwalaysaa inaad gaajaysan tahay ama aadan helin wax ay u baahan karaan ama aysan u baahnayn. Waxa ku yaal maqaaxiyo fara badan iyo dukaamo labadaba gudaha tigidhada iyo banaanka oo xor u ah gelitaanka aagga Tokyo Station. Agagaarka tikidhada waxaa ku yaal dukaamada Gransta iyo dukaamada wanaagsan iyo meelaha wax lagu cunteeyo oo ay ku yaallo hal ka heli kartaa noocyo fara badan oo diyaar u ah inay cunaan cunnooyinka, macmacaannada iyo waxyaalaha la doonayo in la tago, iyo sidoo kale Ekibenya Matsuri, oo ah bakhaar caan ah oo caan ku ah iibinta qado rootiyo laga keenay dalka oo dhan. Dibedda oo ah meelaha xorta ah ee lagu geli karo goobta, Jidka Jikada waa mid ka mid ah maqaayadaha badan soonayaasha oo bixiya fursado cunto oo kaladuwan. Huteelka Tokyo Station Tokyo Station Hotel ayaa la furay 1915 sidii hudheel qaali ah oo marti u ah martida kala duwan ee dibada iyo gudaha. Waxay ku taalaa gudaha Dhismaha Saldhigga Tokyo Marunouchi, oo ah qaarada Yurub ee casriga loo rogo hudheelku wuxuu ka kooban yahay 150 qolal marti sharaf leh, toban makhaayado iyo baarar, iyo jimicsi iyo tas-hiilaadka spa. Qolalka qaarkood waxay bixiyaan aragti weyn oo ku saabsan dhinaca Marunouchi ee Tokyo Station, waxaana jira aagag Halkaasoo martida joogaysa ay kor ka eegi karaan si ay u arkaan naqshadaha guryaha isla markaana hoos u galaan xarunta lafteeda. Kaliya maahan mid adeegga guriga dhexdiisa ah, martida joogista ah ee imaaneysa Narita Express tareenka ka yimaada madaarka Narita ama tareenka xabbadu ku dheehan tahay wuxuu ku raaxaysan karaa albaabka aan lagabi karin ee albaabka adeega albaabka. Meelo ku dhow dhow agagaarka Tokyo Station Waxaa jira dhowr goobood oo wax lagu arko oo gudaha ah masaafad yar oo socod lug ah oo Saldhig Tokyo ah, oo ay ku jiraan degmooyinka ganacsiga ee Marunouchi iyo Otemachi iyo qasriga boqortooyada. Dhismooyinka dabaqyada ah ee ku xeeran Saldhigga Tokyo ee ku yaal dhinaca Marunouchi, Marunouchi Dhismaha, Dhismooyinka Shin-Marunouchi iyo Japan Post ee KITTE waxay soo bandhigaan booqdayaasha khibradaha kala duwan ee wax iibsiga iyo cuntada. Terraces seddexdan dhisme sidoo kale waxay bixiyaan aragti wanaagsan oo ku saabsan wejiga lebenka cas ee Tokyo Saldhig. Ka fog fog, iyo Qulqulka Imperial Palace iyo Beerta Bariiska ee Imperial Palace East, kuwaas oo ku yaal aaga hore ee Edo Castle, u samee booqasho waxbarasho iyo dhaqan. Taasina waxay soo gabagabeynaysaa liiskayaga waxyaabaha aan ka ogaanno Xarunta Tokyo. Waxaan rajeyneyaa inay tani ku siisay fikrad ku saabsan waxyaabaha laga sameeyo gudaha iyo agagaarka xarunta. Macluumaad dheeri ah ama u fiirso fiidiyow kale, dhagsii xiriiriyeyaasha shaashadda hadda ama madaxa u gudub Japan Guide dot com, tilmaan-bixiyahaaga safarka ah ee dhammaystiran, ee ugu dambeeyay, oo ah gacanta koowaad ee ka socota Japan. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Hubso inaad iska diiwaangeliso oo gujiso wargelinta wargelinta fiidiyowyo badan oo ku saabsan Japan. Safarada farxadda leh!
7 Waxyaabaha ay tahay in laga ogaado Xarunta Tokyo | japan-guide.com
< start="3.159" dur="5.491"> Adoo u adeegaya in kabadan nus milyan rakaab ah maalin walba, Tokyo Station waa mid kamid ah saldhigyada ugu mashquulka badan >
< start="8.65" dur="1.52"> Japan. >
< start="10.17" dur="5.45"> Idaacadda ayaa markii ugu horreysay loo furay dadweynaha wax ka badan 100 sano ka hor si dhakhso ahna waxay noqotay transit-ka >
< start="15.62" dur="3.31"> xarun isku xirta Tokyo iyo dalka intiisa kale ee Japan. >
< start="18.93" dur="5.28"> Saldhigga Tokyo wuxuu sidoo kale calaamad u yahay eber mayl badan oo tareeno badan. >
< start="24.21" dur="5.09"> Maanta, Saldhigga Tokyo ee aan ognahay oo aan jecelnahay waa natiijada sanadaha soo celinta >
< start="29.3" dur="1.66"> iyo dhismaha. >
< start="30.96" dur="5.759"> Kooxda Marunouchi ayaa dhowaan loo soo celiyay sharaftiisi hore, taariikhiyan, halka kuwa Yaesu >
< start="36.719" dur="4.191"> dhinac waxay bixisaa muuqaal casri ah oo casri ah. >
< start="40.91" dur="5.6"> Iyada oo leh heerarkeeda kala duwan iyo dhul ballaaran oo dhulka hoostiisa ku yaal oo bixiya adeegyo kala duwan oo ballaaran, cunto cunid >
< start="46.51" dur="6.75"> iyo adeegyo, way fududahay in maalin dhan la laalaado lagana helo Tokyo Station iyo agagaarkeeda. >
< start="53.26" dur="8.54"> Si aan arrimaha kuu fududayno, waxaan soo uruurinnay liis ka kooban 7 waxyaabood oo ay tahay in laga ogaado Xarunta Tokyo. >
< start="61.8" dur="5.2"> JAPAN RAIL CAFE JAPAN RAIL CAFE wuxuu ahaa kii ugu horreeyay noociisa >
< start="67" dur="2.43"> in laga furo Japan. >
< start="69.43" dur="4.779"> Waxay ku taalaa meel ka durugsan Saldhigga Dhexe ee Yaesu ee Saldhigga Tokyo, waxay ka kooban tahay safar >
< start="74.209" dur="5.541"> counter iyo makhaayad siisa socotada macluumaadka socdaalka ee ugu dambeeyay iyo Jabaan >
< start="79.75" dur="2.08"> suxuunta. >
< start="81.83" dur="5.5"> Qurxinta gudaha iyo xusuusta ee JAPAN RAIL CAFE sanad kasta way isbadalaan oo diirada la saaraa >
< start="87.33" dur="4.36"> Gobol ka duwan oo Japan ah wakhti kasta. >
< start="91.69" dur="5.36"> Shaqaalaha miiska safarka waxay bixiyaan talo aragitaan iyo macluumaad iyo waliba howsha >
< start="97.05" dur="3.769"> tareenka iyo iibsashada tigidhada. >
< start="100.819" dur="5.461"> Adeegyadan ayaa bixiya qaab socod safar oo siman oo aan xanuun lahayn, oo aan qiimo lahayn >
< start="106.28" dur="1.95"> markaad booqanayso meel cusub. >
< start="108.23" dur="6.62"> Shaashad balaaran oo is dhexgalin leh ayaa soo bandhigeysa fiidiyowyo safarka ah iyo waliba howlo badan. >
< start="114.85" dur="5.29"> Kafateeriyadu waa goob raaxo leh oo caadi ah, taas oo u fiican la kulanka asxaabta ama waqti dhaafka >
< start="120.14" dur="2.86"> ka hor ama ka dib tareenka la raaco. >
< start="123" dur="4.91"> Cunto-bixiyeyaashu waxay sugi karaan saxamada Japan, waxayna ku lamaan karaan khamri badan oo kaladuwan >
< start="127.91" dur="2.64"> iyo cabbitaannada aan khamriga ahayn. >
< start="130.55" dur="5.18"> Sanduuqyada qaadashada bento qaadane sidoo kale waa la iibsan karaa, kuwa waqtiga gaagaaban. >
< start="135.73" dur="6.62"> Ugu dambeyntiina, makhaayad sida caadiga u qurxan oo ku taal qeybta maqaayada ayaa soo booqdayaasha >
< start="142.35" dur="6.13"> goob sawir qaadis ah oo lagu qaado sawirada xuska. >
< start="148.48" dur="5.66"> Adeegga cambaarada 'ecbo cloak' Helitaanka qashin qafis qolka banaan ee Tokyo Station >
< start="154.14" dur="4.16"> waxay noqon kartaa baadi goob aan macquul ahayn gaar ahaan xilliyada ugu sarreysa. >
< start="158.3" dur="4.76"> Adeegsiga adeegga cambaareynta cirku waxay u oggolaaneysaa mid inuu ka boodo dhammaan dhibaatooyinkaas isla markaana toos u a >
< start="163.06" dur="1.96"> maalin boorso-la'aan. >
< start="165.02" dur="4.56"> Howlaha haynta maalmeed badan waxaa sidoo kale lagu bixiyaa xirmooyin cambaare ah, taas oo ah ikhtiyaar fiican >
< start="169.58" dur="3.35"> loogu talagalay kuwa raba inay ku safraan iftiinka safarada habeenkii. >
< start="172.93" dur="4.15"> Waxa jira tiriyayaal badan oo cambaareyn ah oo cambaareynta ah oo ku yaal Saldhigga Tokyo. >
< start="177.08" dur="4.95"> Si aad u isticmaasho adeeggan, si fudud uga dhig booskaaga booskaaga iyo lacag bixinta ecbo-ga >
< start="182.03" dur="6.29"> iskuxiro websaydhka iyo madaxa dukaanka maalinta si aad u dajiso boorsadaada. >
< start="188.32" dur="5.43"> Dhismaha Saldhigga Tokyo ee Marunouchi Dhismihii Saldhigga Tokyo ee asalka ahaa ayaa la qaabeeyey >
< start="193.75" dur="5.48"> Waxaa qoray Tatsuno Kingo, oo ahaa naqshadeeye reer Japan ah oo karti badan qarnigii 20aad, iyo >
< start="199.23" dur="1.8"> dhammaystiray 1914. >
< start="201.03" dur="6.32"> Si kastaba ha noqotee, dhismaha saldhiga ayaa si weyn loo dhaawacay inta lagu jiray WW2 oo kaliya nooc fudud >
< start="207.35" dur="3.15"> dhismaha dib ayaa loo dhisay dagaalkii kadib. >
< start="210.5" dur="5.25"> Laga soo bilaabo 2007 illaa 2012, dhismaha saldhigga ayaa dib loogu soo celiyay sharaftiisii ​​dagaalka kahor. >
< start="215.75" dur="4.86"> Waxay qaadatay shan sano oo kale in Plaza hore ee saldhiga lagu qurxiyo. >
< start="220.61" dur="4.95"> Maanta, booqdayaashu way arki karaan sida Tokyo Station ay u ekaan jirtay markii la aasaasay >
< start="225.56" dur="7.68"> Sannadkii 1914kii, oo lagu dhammaystiro guryaha woqooyiga iyo koonfurta siday u kala horreeyaan. >
< start="233.24" dur="5.1"> Muuqaalka Saldhigga Tokyo Hoyga Tokyo Station waa matxaf farshaxan >
< start="238.34" dur="3.33"> oo ku yaal gudaha Dhismaha Saldhigga Tokyo Marunouchi. >
< start="241.67" dur="4.15"> Marka lagu daro bandhigyada ku meel gaarka ah, maktabaddu waa meel fiican oo lagu arko qaar ka mid ah >
< start="245.82" dur="5.62"> naqshadaha asliga ah iyo qaab dhismeedka gudaha ee Tokyo Station, oo bixiya wax gaar ah >
< start="251.44" dur="5.15"> isku dhafka fanka iyo hiddaha dhaqanka. >
< start="256.59" dur="3.75"> Goobaha Cuntada iyo Dukaameysiga ee maraya Saldhigga Tokyo weligood ma noqon doonaan >
< start="260.34" dur="5.14"> waa inaad ka walwalaysaa inaad gaajaysan tahay ama aadan helin wax ay u baahan karaan ama aysan u baahnayn. >
< start="265.48" dur="4.47"> Waxa ku yaal maqaaxiyo fara badan iyo dukaamo labadaba gudaha tigidhada iyo banaanka >
< start="269.95" dur="2.64"> oo xor u ah gelitaanka aagga Tokyo Station. >
< start="272.59" dur="5.72"> Agagaarka tikidhada waxaa ku yaal dukaamada Gransta iyo dukaamada wanaagsan iyo meelaha wax lagu cunteeyo oo ay ku yaallo hal >
< start="278.31" dur="6.32"> ka heli kartaa noocyo fara badan oo diyaar u ah inay cunaan cunnooyinka, macmacaannada iyo waxyaalaha la doonayo in la tago, iyo sidoo kale >
< start="284.63" dur="7.42"> Ekibenya Matsuri, oo ah bakhaar caan ah oo caan ku ah iibinta qado rootiyo laga keenay dalka oo dhan. >
< start="292.05" dur="4.38"> Dibedda oo ah meelaha xorta ah ee lagu geli karo goobta, Jidka Jikada waa mid ka mid ah maqaayadaha badan >
< start="296.43" dur="6.53"> soonayaasha oo bixiya fursado cunto oo kaladuwan. >
< start="302.96" dur="5.45"> Huteelka Tokyo Station Tokyo Station Hotel ayaa la furay 1915 sidii >
< start="308.41" dur="5"> hudheel qaali ah oo marti u ah martida kala duwan ee dibada iyo gudaha. >
< start="313.41" dur="4.82"> Waxay ku taalaa gudaha Dhismaha Saldhigga Tokyo Marunouchi, oo ah qaarada Yurub ee casriga loo rogo >
< start="318.23" dur="5.46"> hudheelku wuxuu ka kooban yahay 150 qolal marti sharaf leh, toban makhaayado iyo baarar, iyo jimicsi iyo >
< start="323.69" dur="2.47"> tas-hiilaadka spa. >
< start="326.16" dur="5.01"> Qolalka qaarkood waxay bixiyaan aragti weyn oo ku saabsan dhinaca Marunouchi ee Tokyo Station, waxaana jira aagag >
< start="331.17" dur="5.24"> Halkaasoo martida joogaysa ay kor ka eegi karaan si ay u arkaan naqshadaha guryaha isla markaana hoos u galaan xarunta >
< start="336.41" dur="1.5"> lafteeda. >
< start="337.91" dur="5.47"> Kaliya maahan mid adeegga guriga dhexdiisa ah, martida joogista ah ee imaaneysa Narita Express >
< start="343.38" dur="8.17"> tareenka ka yimaada madaarka Narita ama tareenka xabbadu ku dheehan tahay wuxuu ku raaxaysan karaa albaabka aan lagabi karin ee albaabka adeega albaabka. >
< start="351.55" dur="6.31"> Meelo ku dhow dhow agagaarka Tokyo Station Waxaa jira dhowr goobood oo wax lagu arko oo gudaha ah >
< start="357.86" dur="5.75"> masaafad yar oo socod lug ah oo Saldhig Tokyo ah, oo ay ku jiraan degmooyinka ganacsiga ee Marunouchi iyo Otemachi >
< start="363.61" dur="2.04"> iyo qasriga boqortooyada. >
< start="365.65" dur="5.14"> Dhismooyinka dabaqyada ah ee ku xeeran Saldhigga Tokyo ee ku yaal dhinaca Marunouchi, Marunouchi >
< start="370.79" dur="5.439"> Dhismaha, Dhismooyinka Shin-Marunouchi iyo Japan Post ee KITTE waxay soo bandhigaan booqdayaasha >
< start="376.229" dur="3.851"> khibradaha kala duwan ee wax iibsiga iyo cuntada. >
< start="380.08" dur="5.089"> Terraces seddexdan dhisme sidoo kale waxay bixiyaan aragti wanaagsan oo ku saabsan wejiga lebenka cas ee Tokyo >
< start="385.169" dur="1.411"> Saldhig. >
< start="386.58" dur="5.22"> Ka fog fog, iyo Qulqulka Imperial Palace iyo Beerta Bariiska ee Imperial Palace East, kuwaas oo ku yaal >
< start="391.8" dur="6.02"> aaga hore ee Edo Castle, u samee booqasho waxbarasho iyo dhaqan. >
< start="397.82" dur="3.5"> Taasina waxay soo gabagabeynaysaa liiskayaga waxyaabaha aan ka ogaanno Xarunta Tokyo. >
< start="401.32" dur="4.21"> Waxaan rajeyneyaa inay tani ku siisay fikrad ku saabsan waxyaabaha laga sameeyo gudaha iyo agagaarka xarunta. >
< start="405.53" dur="5.78"> Macluumaad dheeri ah ama u fiirso fiidiyow kale, dhagsii xiriiriyeyaasha shaashadda hadda ama madaxa >
< start="411.31" dur="6.199"> u gudub Japan Guide dot com, tilmaan-bixiyahaaga safarka ah ee dhammaystiran, ee ugu dambeeyay, oo ah gacanta koowaad ee ka socota Japan. >
< start="417.509" dur="1"> Waad ku mahadsan tahay daawashada. >
< start="418.509" dur="5.131"> Hubso inaad iska diiwaangeliso oo gujiso wargelinta wargelinta fiidiyowyo badan oo ku saabsan Japan. >
< start="423.64" dur="0.86"> Safarada farxadda leh! >